HTC dia mikasa ny handefa afovoany vaovao ary hampita izany amin'ny Geekbench | Androidsis
Aaron Rivas | | HTC, About us
Toa izany HTC dia manana telefaona vaovao eo anelanelan'ny fampandrosoana. Ny anarana marketing ho an'ity dia tsy fantatra, fa ny nomeraon-telefaona finday dia '2Q741'.
Tao amin'ny Geekbench no nahitana ity fitaovana ity omaly ary ny valiny momba azy dia manambara famaritana manokana, izay milaza amintsika tsara fa miatrika ambaratonga afovoany isika.
Araka ny hita amin'ny sarin'ny fitsapana apetraka eto ambany, ny HTC 2Q741 dia mitantana Android 9 Pie ary manana RAM 6GB. Ao anatiny dia manana processeur MediaTek MT6765, fantatra koa amin'ny hoe Helio P35. Ity dia ilay chipset mitovy amin'ny herin'ny Xiaomi Mi Play sy ny Honor 8A Pro. Ny tombony ananan'ny HTC amin'ireo telefaona roa ireo dia ny fahaizany RAM; Izy io dia avo roa heny noho ny Honor ary 2 GB mihoatra ny an'ny Mi Play.
Tombantombana fotsiny izany, saingy mahatsapa izany isika ity dia mety ho fanarahana ny HTC Desire 12 na Desire 12+ tamin'ny taona lasa. Ny teo aloha dia miasa amin'ny 6739nm Mediatek MT28, raha ny Desire 12+ kosa dia mampiasa ny 450nm Snapdragon 14. Ny famindrana mankany amin'ny 35nm Helio P12 hanatsarana ny fahombiazany dia tsy fanapahan-kevitra ratsy.
Ireo fitaovana roa voalaza ireo dia nambara tamin'ny volana martsa 2018 ary lasa nividy tamin'ny volana Mey tamin'io taona io, noho izany antenaina fa ho tonga amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny kinova nohavaozina sy avo kokoa io. Na izany aza, ny zava-misy fa ny HTC 2Q741 dia manana 6GB RAM izay toa somary tsy mahazatrasatria ny chipset dia fidirana / ambaratonga midadasika. Ny ankamaroan'ny telefaona ao amin'io sokajy io dia manana RAM 4GB be indrindra.
HTC te ho faty famonoana: handefa smartphone vaovao miaraka amin'ny teknolojia blockchain
Tsy ho ela dia hahazo antsipiriany bebe kokoa momba ity elanelam-potoana miafina ity isika, ary amin'izany dia hampahafantatra momba izay nomanin'ny orinasa Taiwanese ho antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » HTC dia mikasa ny handefa afovoany vaovao ary hampita izany amin'ny Geekbench
Sivanina ny antsipirihany sy ny vidin'ny Moto Z4 sy ny Z4 Force